Okwu ndi ozo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: Ọrụ ndị ọzọ
Kedu onye njikwa kedu? kedu ọrụ nke ọrụ ahụ?
Ihe na 30.11.2018 30.11.2018
Ịchọrọ ịma onye onye njikwa ahụ bụ? Nso ke enye anam, nso idi utom esie? Kedu ihe na-eche onye ọkachamara ihu na mpaghara a? Ihe na ọrụ nke ọrụ a? Anyị ga-enwe obi ụtọ ịgwa gị! ...
Kedu ọrụ ndị a ga-achọ na 5 afọ? Achọrọ ọrụ n'ọdịnihu
Ihe na 04.09.2018
Tupu onye ọ bụla gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ahụ, ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe e mesịrị ajụjụ ahụ bilitere nke onye ga-anọgide na-amụ ihe n'ihu. N'ezie, anyị anaghị echebara ndị ahụ nwere obi ụtọ echiche, bụ ndị si na nwata na-egosi talent maka ...
Onye njikwa akaụntụ: ọrụ ọrụ. Kedu ihe njikwa akaụntụ njikwa na ihe mere?
Ejiri ụlọ ọrụ ọ bụla na-eme atụmatụ nke ọrụ ahụ dịka otu n'ime ihe ndị na-egosi na afọ ojuju ndị ahịa na-arụ. N'ezie, ọ na-esi ike ịdọta ndị ahịa, ma ọ dịkarịa ala, ọrụ ọzọ bụ iji jide ha. Abụọ atụmatụ ndị a bụ mgbe ...
Ọrụ ụmụ nwoke: ndepụta. Ọrụ nwoke na nwanyị
Afọ iri atọ gara aga, ụmụ nwoke niile rọrọ n 'ịghọ ndị na-agba ụgbọelu, ndị na-anya ụgbọelu, ndị uweojii. A kwenyere na ndị a bụ nanị ọrụ nwoke, ebe onye nkuzi ma ọ bụ onye nkụzi bụ nwanyị. Ugbu a ...
Na-arụ ọrụ dịka onye ọkesa: nyocha, atụmatụ na ọrụ ọrụ
Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ nwere mmasị na ọrụ nke onye na-ede akwụkwọ. Nyochaa ọrụ a na-enweta ọtụtụ. Mana n'ozuzu ha, ha nwere nkwenye dị njọ. Ntak-a Kedu ihe onye agha ahụ ga-eme? Kedu ọrụ ndị ọrụ a na-arụ?
Onye bu mmanu? Ọkachamara "onye nwe mmanụ": nkọwa, atụmatụ ọzụzụ na eziokwu na-atọ ụtọ
Fayodor Dostoevsky mara mma nke ọma kwuru okwu amụma: "N'ọdịnihu, ndị na-eme mmanụ ga-achị ụwa." Dị ka ihe ukwu niile, ọ dị mma. Obodo nke nwere ezi mmanụ na gas nwere ike ...
Ọrụ nke onye na-azụ ahịa iji maliteghachi. Ọrụ nke a mpaghara ahịa njikwa
Onye ahịa ahịa bụ ọrụ na-ewu ewu ma chọọ. Kedu ọrụ nke onye na-azụ ahịa? Kedu otu esi eme njem nleta dị mma? Kedu ihe na-eme n'ime ọrụ a? Ka anya lee ihe ndi a nile ...
Kedu ọrụ? Ụdị ọrụ. Ụdị na nkebi nke ọrụ azụmahịa
Onye ọ bụla na-agbasi mbọ ike ịhụ ebe obibi dị jụụ. Ma naanị n'ihi na ego anaghị adaba n'akpa anyị. Iji nweta ha, ị ghaghị itinye onwe gị n'ọrụ gị, mepee ...
Onye na-arụ ọrụ bara uru: nkọwa Job
Isiokwu a ga - elekwasị anya n'otu ọrụ kachasị na - arụ ọrụ. Onye na - ahụta ngwá ahịa - ọrụ dị ezigbo mkpa ma sie ike. A ga-akọwapụta atụmatụ niile nke ọrụ a n'okpuru. Onye bu ahia ahia…
Ajụjụ ndị ị ga-ajụ maka ajụjụ ọnụ? Nnyocha
Ọrụ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ maka onye ọ bụla. Nke a bụ oge ị malitere ime ihe dị mkpa, na-eweta uru ọha na eze, na-ebute ụzọ ịhazi ọdịnihu gị, ụbọchị ọrụ gị. Maka ...
Uzo esi eme ndi ozo na-emeputa ihe: ebee ka ha ga esi amalite, ebe m ga - amu ihe? Ọrụ ejiji
Taa, ọrụ kachasị mma eji ejikọta ya na ụlọ ọrụ mara mma na ejiji, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-agba mbọ ịhụ nnukwu. Iji mezuo nke a, ị pụghị ime n'enweghi ndị ọkachamara n'ọhịa nke nyocha. E wezụga ...
Enwere ọrụ na McDonald site na 16 afọ?
Ọtụtụ ndị na-eto eto nwere mmasị na afọ ole ka a na-ahapụ ha ka ha rụọ ọrụ na McDonalds: site na 16 afọ maọbụ n'oge ọgbọ ọzọ. Kedu ihe iwu kwuru? Na steeti ọ bụla, e nwere ụfọdụ iwu iwu na-achịkwa ọrụ ...
Ọrụ metụtara akụ na ụba na ego: ndepụta. Olee ọrụ ndị metụtara akụ na ụba?
Taa n'ahịa ahia, ọrụ ndị metụtara akụ na ụba nwere ihe dị mkpa. Ebe a dị ọtụtụ na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke ọrụ mmadụ. Chọpụta ihe ọrụ ndị metụtara aku na uba? Ka anyi kwusi na ...
Kedu otu esi agakwuru ọkàiwu ahụ? Oge nile nke mmeri nke ụwa ikpe ziri ezi
Ajụjụ banyere otu esi enweta ọrụ n'ọfịs ọkàiwu na-echegbu ọtụtụ ndị ọkàiwu. Mbụ, ebe a bụ ezigbo ugwu, nke nwere mmetụta dị mma na ọnọdụ mmadụ. Na abuo, ụgwọ nke onye ikpe na-enye gị ohere ịdị ndụ nke ọma ...
Nkọwa Job: Onye isi na-ahụ maka enyemaka
Nnukwu nzukọ - nnukwu ọrụ. Onye isi ụlọ ọrụ agaghị anọ oge niile, n'agbanyeghị enyemaka ndị nnọchite anya. Iji hazie ụbọchị ahụ nke ọma, ịghara ichezọ ihe ọ bụla, ikesa ma na-achịkwa ọrụ ahụ, onye njikwa ahụ chọrọ onye enyemaka. Karịa…
Financier bụ ọrụ n'ọdịnihu
Na oge nke oge a, ọnọdụ ego nke ọtụtụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nta na nnukwu ụlọ ahịa ndị dị ogologo oge na-ere ahịa ma nọrọ n'ọkwá ha, dị njọ. Ihe niile kpatara ụzụ nke ọmụmụ ihe niile ...
Onye bu onye isi? Ọrụ Ndị Nchịkwa
Onye na-ere ihe n'oge a bụ nnukwu ihe gbasara ọrụ nke enyere ya. Maka na a na-emewanye mpaghara a mgbe niile. Ihe na-ewuwanye ewu bụ post onye nchịkwa. Ya mere, taa, ọtụtụ ụlọ ahịa, klọb, salons nwere ...
Akaụntụ Kọmputa Kọmputa: Depụta
Tụlee ọrụ metụtara kọmputa. Ndepụta ha dị nnọọ ukwuu. Otú ọ dị, idepụta ihe niile bụ ihe efu. Kama nke ahụ, anyị na-akọwa ihe kachasị ewu ewu na nkwa. Mgbe niile, naanị nke a ga-ekwe omume ...
Ọkachamara “Onye isi”: nkọwa, uru na ọghọm
Usoro mgbasa ozi, ntụrụndụ dị ka ihe nkiri, ihe ngosi, egwuregwu, egwuregwu na ihe ndị dị otú ahụ aghọwo ihe siri ike na ndụ anyị. Ugbu a, anyị enweghị ike iche n'echiche anyị ga - esi na -
Nkọwa Job banyere isi nke saịtị ahụ. Nkọwa Job banyere isi ụlọ ọrụ ahụ
Ọ dị mfe karị ịrụ ọrụ na mmepụta mgbe ọ bụghị naanị ndị na-akwado ya, kamakwa ndị njikwa ahụ maara ọrụ ha. Otutu ulo oru na-ekewa n'ime ulo akwukwo ma obu ebe ndi na-achikota ya ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,424.